Falanqeynta Kulanka Barcelona Vs Paris Saint-Germain Ee Champions League
HomeChampions LeagueFalanqeynta Kulanka Barcelona Vs Paris Saint-Germain ee Champions League
February 16, 2021 Champions League, Horyaalka France, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda Barcelona ayaa gurigeeda ku soo dhaweeneysa Kooxda PSG kulan ka tirsan lugta hore ee wareega 16-ka Champions League.
Saacada 23:00 pm Waqtiga Somaliya
Garoonka Camp Nou
Barca ayaa laga yaabaa inay dib u soo dhaweyso daafaca Gerard Pique, kaasoo seddex bilood ku maqnaa dhaawac jilibka ah laakiin waxa uu tababar la qaatay kooxda shantii maalmood ee ugu dambeysay.
Kooxda martida loo yahay waxaa ka maqnaan doona daafaca dhexe Ronald Araujo, kaasoo dhaawac canqowga ah uu ku maqnaa.
PSG ayaa la kulantay dharbaaxo aad u weyn madaama weeraryahan Neymar uu dhaawac bowdada ah uga maqnaa kulankii kooxdiisii ​​hore, laakiin ciyaaryahanka reer Brazil ayaa laga yaabaa inuu ku soo laabto lugta labaad 10ka March
Xiddiga garabka ka ciyaara Angel di Maria ayaa sidoo kale ku maqan dhaawac bowdada ah, halka ciyaaryahanka khadka dhexe Marco Verratti uu shaki ku jiro inuu qabo dhaawac sinta ah.
Dhacdooyinka Dhexmaray Labada Kooxood
Barcelona ayaa ka reebtay PSG mid kasta oo ka mid ah seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay ku harto Champions League: 2012-13 quarter-final, 2014-15 quarter-final iyo 2016-17 wareega 16 Markii ugu horeysay oo kaliya ee ay PSG ka adkaato Catalans wareega bug baxda Champions League waxay aheyd 1994-95 wareega afar dhamaadka.
Markii ugu dambeysay ee ay kulmaan Barcelona iyo PSG waxay aheyd 2016-17 wareega 16-ka. Kooxda reer Catalan ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay – iyo ilaa iyo haatan – koox u soo baxda wareega xiga ka dib 4 + goolal lugta hore ee guuldarada ah (lugtii hore 4-0 ayaa looga badiyay Parc des Princes laakiin lugtii labaad ayay ku badisay 6- 1 garoonka Nou Camp).
Laga soo bilaabo 2012-13, kaliya Borussia Dortmund iyo Real Madrid ayaa is wajahay marar badan (10 jeer) marka loo eego Barcelona iyo PSG (8) Champions League. Sideedaas kulan waxay soo saareen 32 gool, celcelis ahaan afartii ciyaarba.
Barcelona ayaa isku dayi doonta inay gaarto afar dhamaadka Champions League rikoorkeedii 14aad ee isku xigta. Markii ugu dambeysay oo ay ku harto wareega 16-ka waxay aheyd 2006-07 oo ay wajaheen Liverpool.